Nyocha, ntuziaka, ntụgharị uche na echiche dị n’akwụkwọ - Ikkaro
N'ebe a, anyị na-ekwu maka akwụkwọ. M na-enyocha ha, na-ekwu maka ha, chekwaa nkọwa, isiokwu m na-eme ka ọ pụta ìhè. Ihe edeturu m n’eme banyere ihe m chọrọ ile anya ma ọ bụ ịmụtakwu ihe m na - ejikọ na websaịtị ndị ọzọ.
Ana m egosipụta echiche ọhụrụ na isiokwu ndị masịrị m. Ha bu akwukwo oru na edemede, akuko, abu.
2 Nkeji nke oru ngo
Na nkebi ohuru a, ana m etinye aka n’onwe m nwere akwụkwọ, akwụkwọ na echiche. A na-akpọ ya Isle nke Gont ma ana m aga n'ihu ya ebe a. N'ime oru ochie a, etinyere m onwe m n'ihe gbasara edemede.
Ugbu a ịbịaru nso ga-adịtụ ntakịrị ma aga m egosipụta akụkụ niile m weere dị ka ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na m ga-enwe ike m ga-ejikọ ha na isiokwu niile anyị na-eme. Ọ bụghị naanị na ọ ga-abụ ajụjụ ederede.
Agaghị m achọpụta n'oge a Mateldi asensi ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ya. Iacobus bụ nke atọ ma ọ bụ nke anọ m gụrụ, anaghị m echeta nke ọma, yana oge niile ọ bụ ezigbo akwụkwọ ederede. Agile, ngwa ngwa na-akpali mmasị.
Iacobus dị mma mgbe ịchọrọ ịgụ ọkụ, akụkọ ihe mere eme na ịgụ njem. You ga-ahụ ya n'anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe metụtara Templars na Order of the Temple.
Ndị Magi ewetara m mbipụta nke akwụkwọ m chọrọ n'ezie. Ithaca nke Cavafis, mbipụta Akwụkwọ Nordicna ntụgharị nke Vicente Fernández González na ihe osise nke Federico Delicado.
Ọ bụ ya bụ ihe mbụ m gụrụ n’afọ ahụ. Mbipụta iji nwee ntakịrị mkpali ma nwee ike ịgụ ma gụgharịa ya mgbe ịnụ ụtọ ihe osise ya.
Lee akwụkwọ egwu egwu n'anya
Ewepụtara m akwụkwọ a n’ọ́bá akwụkwọ (ị nwere ike ịzụta ya n'ime Amazon). Amalitere m ịgụ ma chọpụta ihe dị ịtụnanya. O nwere udiri egwu, akwukwo di nkenke, asusu di egwu, na otutu asusu. Ha dị ka isiokwu karịa akwụkwọ. M tụrụ anya ihe yiri nke ahụ Obere akụkọ banyere Spain nke Juan Pablo Fusi dere, mana ezighi ezi.
Ma n’ezie, ịgụ nanị azụ azụ (ihe anaghị amasị m ịme) gosipụtara enyo enyo ahụ. A akụkọ ihe mere eme nke Spain, bụ nchịkọta nke isiokwu Arturo Pérez-Reverte bipụtara maka ihe karịrị afọ 4 na kọlụm ya Marque de Mar nke mgbakwunye XL Semanal.
Ọ bụrụ na ịgụbeghị kọlụm izu ya, ihe m na-ekwu bụ:
Ihe dị na ya bụ na Sagunto, onye bụbu obodo ndị Gris, na ndị Rom jikọrọ aka: ụfọdụ turkeys na oge ahụ - narị afọ nke atọ BC, na-atụle ya - na-amalite ịme akwa na Mediterranean. N'ezie. Nnụnụ dị ịrịba ama tinyere aka na agha na ihe ndị dị otú ahụ.
Enweghị m mmasị n'akwụkwọ ahụ ma anaghị m akwado ya. M na-amalite ike. Ọ jọgburu onwe ya na ọ bụ ihe mbụ m gụrụ n’afọ ahụ. Nke a na-eme m n'ihi na ịmaliteghị ịgụ afọ Uru nke abaghị uru, a omenala 2 afọ na agaghị m ahapụ ida.
Maka akwụkwọ Honoré, echere m na o nwere ihe karịrị ọkara ibe akwụkwọ fọdụrụ. Anọ m na-arụrịta ụka ma m ga-ede nyocha a ma ọ bụ na agaghị m ede ya, mana ebe ọ bụ na enwere ihe ndị dị mma mgbe niile, m na-ahapụ ha ebe a ka edere ma ọ bụrụ na n'ọdịnihu m chọrọ inyocha isiokwu nke dọtara uche m. Mee ka blog a bụrụ ihe ncheta m.
Ogologo oge gara aga agụrụ m Otu anyị si ere igwe kwụ otu ebe akwụkwọ na Ignacio Ramonet dere ya na Noam Chomsky kemgbe ahụkwa m masịrị m. Nke Chomsky, anọgidere m na-agụ ọtụtụ ọrụ ya mana nke Ramonet, emebeghị m ya ruo ugbu a. Ọ na-aga na ngalaba anyị akwụkwọ.
Mmegbu nke nkwukọrịta bụ edemede na arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na obodo anyị. Na-elekwasị anya na ọrụ telivishọn.
Booklọ ahịa akwụkwọ ahụ bụ nnukwu akwụkwọ ọgụgụ Penelope Fitzgerald. Nnukwu mbipụta a nke Impedimenta (dị ka mgbe niile) nwere ntụgharị site Ana Bustelo na Postface nke Terence Dooley sụgharịrị. M hapuru gi a njikọ dezie.
N'ụlọ ahịa akwụkwọ, Penelope Fitzgerald na-akọ akụkọ banyere Florence Green, nwanyị di ya nwụrụ chọrọ ịtọ ụlọ ahịa akwụkwọ na obere obodo, Hardborough, ebe o bi kemgbe afọ 8. E debere ya na 1959, dịka anyị kwuworo n'otu obere obodo ịkụ azụ na England.
Na edemede a Amartya Sen, Nobel Laureate na akụnụba na 1998 na-ekwu maka mkpa ochichi onye kwuo uche ya, uru ọ bara ma gwa anyị gbasara akụkọ ifo dị iche iche na-ebilite metụtara ọdịda anyanwụ na maka ijikọ ụwa ọnụ.
Edemede nke ụlọ obibi akwụkwọ depụtara El viejo topo yana nsụgharị nke Javier Lomelí Ponce, na-eme ka anyị tụgharịa uche na nsonaazụ ọchịchị onye kwuo uche ya na ihe ọ pụtara maka mba iji guzobe usoro a.
E kewara akwụkwọ a ụzọ atọ:
Ochichi onye kwuo uche ya na mgbọrọgwụ ya zuru ụwa ọnụ.
Ochichi onye kwuo uche ya dị ka uru zuru ụwa ọnụ.
Ikpe banyere ijikọ ụwa ọnụ.
Nna nwunye m nyere m otu akwụkwọ site n’oge ọ bụ nwata ụbọchị ọzọ iji dezie ya. Ọ bụ nke ha gara n’ụlọ akwụkwọ. Spain dị ka nke ahụ. Akwụkwọ ahụ na mkpuchi ya nọ n'ọnọdụ ọjọọ na mpempe akwụkwọ dị n'ime. Ọ dị nwute ma enweghị m ike ịhụ foto ọ bụla tupu foto. Emere m ha, mana amaghị m ebe ha nọ :-(
Ọ bụ akwụkwọ nke ọchịchị aka ike. Childrenmụaka kpọgara ya ụlọ akwụkwọ, ọ bụkwa ụlọ akwụkwọ na-ebipụta Akwụkwọ na Spanish. N'ime anyị na-achọta indoctrination dị ọcha. ndọrọ ndọrọ ọchịchị stof. Mana echere m na akwụkwọ ahụ bara uru na akụkọ ntolite, ọ dịkwa ka mpụ ịtụfu ya.